स्याउ खेती गर्ने तरिका Nepalpatra स्याउ खेती गर्ने तरिका
स्याउ खानुका स्वास्थ्य फाइदाहरू अनगिन्ती छन्। स्वस्थ फाइबर, भिटामीन अनि कार्बोहाइड्रेटले भरिएको स्याउ दैनिक सेवन गर्न विश्वका सबै चिकित्सकहरू सल्लाह दिन्छन्। भोक लागेको बेलामा पनि स्याउ खाँदा केहि बेरको लागि भएपनि भोकलाई टाढा राख्दछ। तथापी, सबै खानेकुराजस्तै स्याउ पनि धेरै खाएमा फाइदा भन्दा बेफाइदा गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । स्याउ खेती गर्दा अपनाउनुपर्ने केहि कुराहरु :
स्याउ खेतीको लागी कस्तो हावापानी चाहिन्छ?
स्याउको लागी आवश्यक तापक्रम के हुनु पर्छ?
स्याउको वृद्धि विकासको लागी के कती तापक्रम हुनु पर्छ?
स्याउको फुलफुलेको अवस्थामा कस्तो हावापानीले नकारत्मक असर पार्दछ?
स्याउ फलको बृद्धि विकास भई रहेको समयमा कस्तो बातावरण चाहिन्छ?
स्याउ उत्पादनको लागी बर्षाको (पानी पर्ने) अवस्था कस्तो हुनु पर्छ?
स्याउ खेतीको लागी कस्तो माटो चाहिन्छ?
स्याउका कम चिसो चाहिने जातहरु कुन-२ हुन्?
स्याउका मध्य चिसो चाहिने जातहरु कुन-२ हुन् ?
स्याउका धेरै चिसो चाहिने जातहरु कुन हुन् ?
स्याउ खेती गरिएको बगैचामा कति स्याउ वोटको लागी कति मौरीको घार राख्नु पर्छ?
स्याउ बगैचा लगाउदा के कस्ता निर्णय गर्नु पर्छ?
स्याउको बोटले कहिले सम्म उत्पादन दिन्छ ?
स्याउ बगैचा स्थापनाको लागी रेखाकण कसरी गर्ने?
स्याउ विरुवा रोप्नलाई खाडलको अकार कस्तो हुनु पर्दछ?
स्याउको छिटो र बढि उत्पादन लिन कुन प्रविधीले स्याउ खेती गर्नु पर्छ?
स्याउमा राम्रो फल लाग्नको लागी के कती तापक्रम राम्रो हुन्छ?
स्याउको फूलफूल्ने समयमा बर्षा र आद्रता कती हुन पर्छ?
स्याउ बगैचाको उपयुक्त सिंचाई प्रणाली कुन हो?
स्याउ बगैचामा कस्तो अन्तरवालीको छनौट गर्नु पर्छ?
स्याउ बगैचामा कस्ता वालीहरु लगाउनु पर्छ?
कस्तो जग्गाको लागी सफासुग्घर खेती राम्रो हुन्छ?
स्याउ बगैचामा मलखाद कहिले प्रयोग गर्ने?
स्याउ वोटको तालिम (Training) किन र कहिले गर्नु पर्छ?
स्याउको विरुवा कती दुरीमा रोप्ने?
स्याउ विरुवा रोप्न कहिले खाडल खन्नु पर्छ?
स्याउ विरुवा रोप्नलाई खाडल कस्तो खन्नु पर्छ?
स्याउ विरुवाको कांटछांट कहिले गर्ने?
स्याउलाई पत्ल्याउदाँ प्रति झुप्पा कती फल राख्नु राम्रो हुन्छ?
स्याउको राम्रो उत्पादन लिनलाई फल र पातका अनुपात के हुनु पर्छ?
स्याउको फल झर्न रोक्न के गर्नु पर्छ?
स्याउमा परागसेचनको लागी कति जग्गाको लागी कति मौरीघार राख्नु पर्छ?
स्याउको फल कहिले टिप्नु राम्रो हुन्छ?
स्याउको फल के कति दिनमा तयार हुन्छ?
उत्पादित स्याउको भण्डारण कसरी गर्ने?
स्याउमा लाग्ने किराहरु के के छन्?
स्याउमा लाग्ने किराहरु नियन्त्रण गर्न के गर्ने?
स्याउमा लाग्ने रोगहरु के के हुन?
स्याउमा लाग्ने रोगहरुको नियन्त्रण गर्ने उपाय के के हुन?
सिन्धुपाल्चोकको कोइरालटारमा थालियो सामूहिक आलुखेती